mercredi, 06 mars 2019 12:46
Lycée Zafy Albert-Antsiranana: Niato hatramin’ny fampianarana
Tonga nizara kahie telo, penina ary fitsipika isan’olona, Rtoa Joceline Maxime, depioten’Antsiranana I teo aloha, sy ny mpiara-dia aminy androany maraina. Tovovavy mpianatra miisa 45 no nisitraka izany tamin’ny mpianatra tao amin’ny Lycée Zafy Albert.
Ankizivavy 15 isan-tsekoly kosa ho an’ireo sekolim-panjakana CEG sy EPP teto amin’ny Cisco Antsiranana I, izay niato ny fampianarana noho io fizarana fitaovam-pianarana natao tao amin’ny Lycée Zafy io androany maraina.
Nalefa teo nandritra izany ny hiran’ny fampielezan-kevitry ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina.
Tafiditra indrindra amin’ny fankalazana ny andron’ny 8 marsa ny hetsika.
mercredi, 06 mars 2019 12:26
Venezuela: Hienjana ny tady
Taorian'ny fiverenana an-tanindrana ny lehiben'ny mpanohitra, nanandran-tena ho filoha vonjy maika, Juan Guaido, dia nanentana ny rehetra izy hanao hetsika lehibe ny sabotsy ho avy izao.
Tsy niandry ela ihany koa ireo mpomba ny filoha voafidim-bahoaka Nicolas Maduro, fa dia hikarakara hetsika lehibe ihany koa ny sabotsy ho avy izao.
mercredi, 06 mars 2019 12:09
Diplaomasia: Michael Pelletier no masoivoho vaovaon’i Etazonia eto Madagasikara
Nantitranterin'ny Ambasadaoro Pelletier nandritra ny fihaonana ireo fiaraha-miasa izay efa misy eo amin'ny firenena roa tonta. Nilaza ihany koa ny Ambasadaoro fa miandry fatratra ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta sy amin'ny sehatra tsy miankina izy hitadiavana izay fomba tsara indrindra hanohanana an'i Madagasikara hanatratra ny tanjony.
Michael Pelletier izany no mandimby toerana an’i Robert T. Yamate.
mercredi, 06 mars 2019 12:00
Fifidianana depiote: Hirotsaka ao Toamasina i Riri Be, any Mahanoro i Elisée Ratsiraka
Rahampitso alakamisy no hanatitra ny maha-kandida depiote azy eo anivon'ny OVEC Toamasina i Rakotomalala Henri na Riribe, ny zoma 08 martsa kosa aorian’ny karnavalin’ny vehivavy eto Toamasina no hanatitra ny azy i Dr Ndahimananjara Johanita izay depiote teo aloha.
Hatreto aloha dia mbola tokana ny tonga nametraka ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiany ho depiote ao amin’ny OVEC Toamasina dia i Mahavimbina Alain avy amin'ny GAR (Gasikara Antsika Rehetra) ary lehiben’ny Faritra Atsinanana tamin’ny tetezamita.
Ny ao Fenoarivo Atsinanana hatreto dia tsy mbola nisy nametraka antontan-taratasy teo anivon’ny OVEC.
Dr Ratsiraka Elisée Laurent indray voalaza fa ho kandida depiote ao Mahanoro taorian'ny fanonganan'ny mpanolotsain'ny Kaominina ambonivohitr’i Toamasina azy, in-droa izao, tsy ho Ben’ny tanànan’i Toamasina.
mercredi, 06 mars 2019 11:54
Oniversiten’i Toamasina: Tanterahina anio ny fifidianana filoha
Enina ny kandida, ka vehivavy ny iray amin’ireo hifaninana ho filohan’ny Oniversiten’i Toamasina mandritra ny latsabato tanterahina anio ao Barikadimy. Tsy kandida intsony ny filoha ankehitriny fa efa nahavita taom-piasana roa.
Amin’ny fiafaran’ny tolakandro ihany dia ho fantatra izay ho filoha vaovao hisolo an'i Pr Dr Velo Jérôme.
mercredi, 06 mars 2019 11:20
Korea avaratra: Manomana fanohizana ny andrana amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika i Pyongyang
Taorian'ny tsy fahombiazan'ny fifampiraharahana teo amin'i Donald Trump sy Kim Jong-un tany Vietnam tamin'ny herinandro lasa teo, dia nanohy ny fanomanana ny andrana, andefa fusée afaka hitondra baomba nokleary i Korea avaratra.
Nandritra ity fihaonana faharoa tamin'ireo filohan'ny Amerika sy Koera avaratra moa dia efa nanaiky ny anafoana izany programa fikarohana momba ny fitaovam-piadiana nokleary izany i Kim Jong-un, nitaky kosa izy ny anesorana ireo sazy ara-barotra sy ara-toekarena iraisam-pirenena mangeja an'i Korea avaratra, izay nolavin'i Donald Trump tamin'ny fotoana farany moa izany, ka nilazany fa mbola tsy afaka manala izany sazy izany aloha izy amin'izao dingana misy izao.
Tsy niandry ela moa ity tanora mafana loha ity, fa dia izao nanohy ny andrana ara-tafika izao.
mercredi, 06 mars 2019 10:56
Japon: Nivoaka ny fonja i Carlos Ghosn
Taorian'ny fampakarana nataon'ny fampanoavana japone ny anakanana ny fivoahana am-ponja an'i Carlos Ghosn, dia nanapaka ny fitsarana japone fa omena fahafahana vonjy maika ity Tale jeneralin'ny Nissan-Renault ity, rehefa nandoa vola 1 miliara yan, 7.9 tapitrisa Euro.
mercredi, 06 mars 2019 10:18
Finoana: Manomboka androany alarobia ny fotoanan'ny Karemy
Amin'ny finoana Katolika, dia misy ny fotoana fiomanana amin'ny Paka, izay andro lehibe indrindra amin'ny Fiangonana Katolika, nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty hanavotany an'izao tontolo izao.
40 andro alohan'ny Paka no manomboka ny vanim-potoan'ny Karemy (tsy isaina ny andro alahady fankalazana ny Eokaristia), fibanjinana ny hazo fijaliana, toy ny fitsapana natao an'i Kristy tany an'efitra nandritra ny 40 andro sy 40 alina.
Ny Karemy izany, dia fotoana fivavahana, fandinihan-tena, fibebahana, fijerena ny hafa bebe kokoa, na dia efa takiana hanao izany isan'andro aza ny Kristianina Katolika. Fihafihana, fiainana ny tsotra indrindra, famelan-keloka, fanamafisana ny fihavanana amin'ny hafa, fanonerana ny fahotana.